4 Waxyaabaha aad u baahan tahay inaad ka ogaato Manager Samsung Task
Ha mararka qaarkood aad rabto in aad ogaato waxa ka socda in aad telefoon? Dadka intooda badan ma u baahan tahay macluumaad aad u badan oo ku saabsan taleefannadooda haddii aanay ku ogeysiin foomka oo aad telefoon si degdeg ah laga heli doonaa. Tani waa run, waayo, inta badan, laakiin waxaa jira waqtiyo aad rabto in aad hesho cudurka cad ee gobolka aad telefoon. Waxaad tusaale ahaan u baahan karaa warbixin ku saabsan tirada barnaamijyadooda iyo meel ay mashquulin ku saabsan telefoonka. Marar kale, waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay warbixin ku saabsan xasuus aad telefoonka ee, haddii aadan aqoon sida loo tago oo ku saabsan qaadan; waxay noqon kartaa dhibaato dhab ah.
In dunida maanta, barnaamijyadooda jira ayaa xal fiican u wax kasta. Sidaa darteed, waxaad ku nasan karo xaqiijiyay in ay jiri doonaan app ah arrintan sidoo kale. Laakiin ka hor inta aanad tegi raadinaya app lagu xallin doonaan dhibaatada, waxaa jira software kaa caawin kara. Tababare Task Samsung waxaa loogu talagalay in la qabto, iyadoo wax badan oo fudayd.
Bal aynu eegno waxa ay tahay iyo sida ay u shaqayso.
Waa maxay Manager Samsung Task ah?
Tababare Task Samsung waa app ah oo kuu ogolaanaya in aad si sax ah si aad u aragto waxa ka socda in aad telefoon. App Tani waa mid aad u muhiim ah, sababtoo ah waxaa kuu ogolaanaya in aad si aad u aragto sida ay barnaamijyadooda aad u sameeyaan, sida ay u badan yihiin meel ay qaadato iyo xitaa inta ay le'eg yihiin meel ay qaadato. Sidaa darteed waa kaamil tagaan-in xal haddii aad rabto nooc ka mid ah macluumaadka ku saabsan telefoonka iyo waxqabadka. Waa maxay dheeraad ah, waxaa la horumariyo by Samsung ee telefoonada Samsung.
Waa codsiga muhiim ah in ay dadka isticmaala Samsung noocyo kala duwan oo sababo. Aan aragno waxa Manager Task Samsung samayn karaa adiga iyo qalab Samsung for.
Waa maxay Manager Task Samsung samayn karaa
Waxa ugu horeeya ee aynu doonayno inaynu u yidhaahdo oo ku saabsan Manager Task Samsung waa in ay tahay il weyn oo ku saabsan qalab aad. Halkan waxa ku jira arimo dhowr ah oo Manager Task ah kuu samayn doonaa.
• Waxa ay muujinaysaa in telefoonada ee hadda socda Chine.
• The tabs sare ee Manager Task ka muujin doonaa dhammaan macluumaadka ku saabsan barnaamijyadooda aad soo bixi.
• Maamulaha Task ayaa sidoo kale muujinaya doonaa xusuusta telefoonka ee (RAM) oo waa wax fiican maxaa yeelay waxa uu kuu ogolaanayaa inaad ogaato marka waxqabadka telefoonka hoos u yar ah.
• Waxa kale oo ay dili doonaa hawlaha ku saabsan telefoonka ilaa in qaadatid oo aad u badan meel iyo processor mar. Sidaa darteed waa qiimo leh marka aad rabto in la kordhiyo qaab aad telefoonka ee.
• Waxa kale oo aad isticmaali kartaa Maamulaha Task in la banneeyo barnaamijyadooda default iyo ururada ay.
• Waa tababare weyn app.
Sida aad u heli kartaa Maamulaha Samsung Task ah?
Tababare Task Samsung ayaa si fudud waxaa laga heli karaa telefoonka ama kiniin. Raac tallaabooyinkan si aad u hesho Manager Task ku saabsan Samsung Tablet.
Tallaabada Koowaad : Tab iyo hay badhanka guriga ee aad kaniiniga
Tallaabada Labaad : Tubada on Manager Task icon ee geeska hoose ee bidixda ah screen iyo tababare Task muuqan doonaa. Halkan waxaad ka heli kartaa wixii macluumaad ah oo ku saabsan Manager Task in aad rabto in aad by siyoodba gal Tab ay khuseyso.
Ka Badeli kara ee Manager Task Samsung
Mararka qaar ma rabto in aad isticmaasho Manager Samsung Task ah. Sabab kasta, waxaad weli heli kartaa barnaamijyadooda aad u wanaagsan in suuqa in sida fiican u shaqayn karaan. Kuwa soo socda waa qaar ka mid kale oo weyn oo ay ku Manager Samsung Task ah. Markaasay waxay wada shaqayn la mid ah si ay u Manager Task oo ay la jaanqaadaan qalabka Android ugu. Waxaan waqti u qaatay inuu haadiyo iyada oo Chine aad u tiro badan suuqa in ay la yimaadaan 3.
1. Maareeyaha Smart Task
Features Muhiimka ah: app tani waxay u oggolaanaysaa taageerada amarka multi-xulo oo kuu ogolaanaya in aad si aad u aragto liiska adeegyada, soo jeeda, codsiyada madhan. Waxa kale oo ay ku siin doonaan macluumaad ku saabsan codsiyada oo ay ku jiraan tirada ugu barnaamijyadooda iyo app version macluumaadka.
Features Muhiimka ah: u shaqayso si aad u xakamayn lahaayeen barnaamijyadooda iyo xitaa dilaan dhowr ah oo aad u hesho jidka aad qaab Phone ama qalab.
3. Advanced Task qabaal
Features Key: oo waxaa reer Chine ee aan ku taxan ilaa iyo mid fudud in la isticmaalo. Users Inta badan waxa ay u eg, maxaa yeelay, waxay u badan sahlay ka badan kuwa kale oo weli u shaqeeya sida si fiican. Waxaa maamuli doono barnaamijyadooda aad aad u karti leh oo xitaa dilaan aad GPS marka lagu fara qaab telefoonka ee.
Waxaad sidoo kale arki doontaa in mid kasta oo ka mid ah barnaamijyadooda ku xusan ayaa siyaada ah oo ka shaqeynayaan in aadan heli doonaa Manager Samsung Task ah. Waxaan ku talinaynaa in aad eegto iyada oo muuqaalada ku daray sida hab filter si uu kaaga caawiyo in aad doorato mid ka mid kuu shaqeeya.
> Resource > Samsung > 4 Waxyaabaha aad u baahan tahay inaad ogaatid oo ku saabsan Manager Samsung Task